မိမိကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ movie တွေက LOGO တွေကိုဖျောက်ပေးနိူင်တဲ့ SoftOrbits Remove Logo Now! Pro 1.5 ~ မိုးညိုသား
မိမိကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ movie တွေက LOGO တွေကိုဖျောက်ပေးနိူင်တဲ့ SoftOrbits Remove Logo Now! Pro 1.5
4:08 AM ဆော့ဝဲလ်များ No comments
SoftOrbits Remove Logo Now! Pro 1.5 | 10.39 MB
ဒီနေ့ ကျနော် ပေးခြင်တာလေးရှိပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ လလောက်ကလည်း
ညီလေးတယောက်တောင်းထားဖူးပါတယ်။သူလည်းတော်တော် ပတ်ရှာနေတာ မတွေ့ရသေးဘူး
ဘာလည်းဆိုတော့ movies တွေ နိူင်ငံခြားက ပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာ movies ဖြစ်ဖြစ်
မိမိ အဆင်ပြေမယ့်နေရကြနေဒေါင်းလာတယ် ဆိုပါစို့ ။အဲဒီမှာ မျက်စိရှုပ်စရာ ဘာတွေ့လည်း ဆိုတော့
LOGO တွေ watermark တွေပါ..ဟင်းဟင်း..ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး
မျက်စိနောက်တဲ့လူကပြောဖူးလို့ပါ...ငိငိငိငိ ။အဲဒီ Logo တွေ watermark တွေကို
ဖျောက် ပေးနိူင်တဲ့ ဆော့ဝဲကောင်းလေးပါ။ကျနော် လည်း ဖူးဗားရှင်းဖြစ်မဖြစ်စမ်းရင်း
သူ့ကိုလည်း နဲနဲပါးပါးတီးခေါက်ကြည့်တော့ အမှန်တကယ် ပျောက်တာတွေ့ရတယ် ခင်ဗျာ။
မူရင်းပိုင်ရှင်တွေကတော့ ဆဲ မလားမသိဘူးနော်...ခွင့်လွှတ်ပါ.ကျနော်တို့က နည်းပညာမျှဝေရုံ
သက်သက်ပါ။ပုံလေး ၂ ပုံ ကျနော်ယူထားတယ် အောက်မှာကြည့်လိုက်ပါ
အပေါ်က ပုံမှာသတိထားမိလားမသိဘူး Heart ကထုတ်တဲ့ vcd ခွေဆိုတော့
သူ့ရဲ့ တံဆိပ် Heart ဆိုတာလေး ပါလာတယ်။အဲ့ဒါကို ကျနော်က ဖျောက်လိုက်တယ်။
အောက်ပုံမှာဆက်ကြည့်ပါ။ Heart ဆိုတဲ့ အနီရောင် စာလုံးကို မမြင်ရတော့ပါဘူး ခင်ဗျာ
ကျနော်က စမ်းသပ်ရုံစမ်းထားတာဆိုတော့ သေသေသပ်သပ်တော့မရှိဘူပေါ့နော်။
တကယ်လို့ လှလှလေး လိုချင်ရင်တော့ မိမိကိုယ်တိုင် ဆော့ဝဲ ကိုအောက်မှာ
ဒေါင်းယူပြီးစမ်းသပ် ကြပါခင်ဗျာ။ဖိုင်ထဲမှာ ဖတ်ပေးပါ ဆိုတဲ့ text လေး ပါ ပါတယ်
အထဲမှာ Key လေး ရေးထည့်ထားပါတယ်။ registered လုပ်တဲ့နေရာမှာ Key လေးထည့်ပေးပြီး
မိမိနှစ်သက်ရာ Email ထည့်ပေးလိုက်ပြီး save လုပ်လိုက်ပါ ခင်ဗျာ
MEDIAFIRE | BOX | SHAREBEAST | ZIPPYSHARE